Inqilaab Millateri Oo Ka Dhacay Suudaan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Inqilaab Millateri Oo Ka Dhacay Suudaan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Inqilaab Millateri Oo Ka Dhacay Suudaan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Hoggaanka ugu sarreeya ciidanka Melleteriga wadanka Suudaan ayaa kusoo qulqulaya xarunta Raadiyaha iyo Telefeshinka magaalada caasimadda ah ee Al Khurduum halkaas oo saaka ay la wareegeen kuna dhawaaqeen in ay rideen dowladdii Cumar Xasan Al Bashiir.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in goordhow labaahin doono bayaan rasmi ah oo ay soo saarayaan ciidamada Meleteriga, saraakiisha ciidanka ayaa ku mashquulsan qaabka loo qorayo bayaanka oo adduunka oo idil iyo shacabka wada sugayaan.
Wakaaladaha wararka ayaa faafiyay in xabsiga la dhigay mas’uuliyiinti ugu sarraysay wadanka Suudaan sida Ku xigeenkii Al Bashiir ninka lagu magacaabo Cali Cusmaan Daaha iyo Axmed Haaruun oo ahaa ku xigeenkii Xisbiga talada haya, sidoo kale saraakiisha laxiray waxaa kamid ah Cabdi Raxiim Max’med Xuseen oo ahaa wasiirkii hore ee Difaaca.
Boqolaal gaadiidka gaashaaman ah oo ay la socdaan ciidamada saraakiisha Melleteriga ayaa isku hareereeyay qasriga madaxtooyada oo larumeysanyahay in lagu haayo Cumar Xasan Al Bashiir balse laga xayuubiyay dhammaan wixii xasaanad maamul ah ee uu lahaa.
Wararka oo iska soo daba-dhacaaya ayaa kuwoodii ugu dambeeyey sheegayaan in Xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Al Koobar laga sii daayay dhammaan dadkii ku xirnaa gudaha xabsiga sida uu sheegay taliska Sirdoonka xukuumadda dabadhilifka ah Ee Suudaan kajira.
War kasoo baxay taliska sirdoonka ayaa lagu sheegay in dhammaan xabsiyada wadanka lagasii daayay dadkii u xirnaa arrimaha siyaasadda balse waxaa wali xabsiyada ku xiran dadka ku eedaysan dambiyada waxa loogu yeero Argagaxisada.
Rasaas xooggan oo maanta barqadii ka dhacday hareeraha xarunta Taliska ciidanka magaalada Al Khurduum ayaa lagu sheegay mid loogu dabaal degayay isbedelka dhanka maamulka ah ee wadanka ka dhacay.
Kumanaan kun shacab ah ayaa taagan fagaarayaasha waaweyn ee wadanka Suudaan waxayna ka war dhowrayaan bayaanka kasoo bixi doono taliska ugu sarreeya ciidamada melleteriga ee Inqilaabka sameeyay.
Al Bashiir ayaa talada wadanka Suudaan Inqilaab melleteri ku qabsaday sanaddii 1989-kii wuxuuna wadanka ku maamulayay gacan melleteri, dhacdooyinkii ugu xumaa ee uu usoo joogay intii uu talada hayay waxaa kamid ahaa kala go’itaankii waqooyiga iyo Koonfurta iyo dagaalka ka holcaya gobolka Daarfoor.